Kooxo hubaysan oo weerat xabsiga dhexe ee Galkacyo, iyo taliyaha xabsiga oo arrintaasi nooga warramay. – Radio Daljir
Agoosto 12, 2012 6:53 b 0
Gaalkacyo, Aug 12- Ugu yaraan? Labbo nin oo ka mid ahaa kooxo hubaysan oo weerar ku qaaday galabta xabsiga weyn ee Gaalkacyo ayaa dhaawac uu ka soo gaaray ka dib markii muddo nus saac ka badan ay israsaasayn xoogan ku dhex-martay dablaydaasi hubaysan iyo ciidanka xabsiga oo markii danbana gacan ka helay ciidan kale oo ka yimid gudaha magaalada.
Weerarkan hubaysan oo ahaa mid qorshaysnaa ayaa kooxaha soo qaaday oo la tilmaamayo inay u badnaayeen burcad-badeed waxay wateen gaadiid shacab waxaana ay ku hubaysnaayeen hub uu ka mid yahay qoriga PKM oo gaarayay ilaa iyo dhawr qori sida uu inoo xaqiijiyay Taliyaha xabsiga weyn ee Gaalkacyo G/dhexe Aadan Nuur Qaal oo isagu xiligaasi ku sugnaa gudaha xabsiga sida uu inoo sheegay.
Taliyaha xabsiga weyn ayaa sheegay inuusan ilaa hada garanayn kooxahaas iyo cidda ay ka tirsan yihiin balse uu u malaynayo inay gacan saar la leeyihiin burcada magaalada ku sugan.
” Annagoo iska joogna xabsiga oo ay walibana Ramadaan tahay ayaa kooxo hubaysan oo waliba wata dhawr qori oo daba-jeex waxay naga soo weerareen dhanka magaalada, inaguna difaac ayaan galnay ka dib markaan saacado israsaasaynay waxaa gadaal ka soo galay ciidan ka tirsan kuwa ammaanka ee Puntland oo ku soo kacay dhawaqa rasaasta iyo war-galin aanu siinay mar danbe, way carareen khasaare dhawr nin baa ka dhaawacmay laakin annaga waxba nama gaarin”, Ayuu yiri Gaashaanle dhexe Qaal.
Saraakiisha kale ee gobolka Mudug dhinaca Puntland iyo degmada oo dhacdadan aynu wax ka waydiinay ayaa ka gaabsaday inay wax tafaasiil ka bixiyaan, dhacdadan xagal-daacinaysa xasiloonida ammaanka Gaalkacyo ayaa? ku soo aadaysaa xili habeennimadii? isla magaalada lagu dilay nin rayida oo ganacsadaa mid kalana lala dhaawacay salaadii makhrib ka dib xaafadda garsoor, inkastoo laamaha ammaanku ay sheegayaan inay socdaan baaritaano ku aadan falkaasi.